बैंकले सार्वजनिक गरे वित्तीय विवरण, कुनको नाफा कति ? – Nepal Press
बैंकले सार्वजनिक गरे वित्तीय विवरण, कुनको नाफा कति ?
२०७७ माघ १४ गते १३:४१
काठमाडौं । बैंकहरूले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्न थालेका छन् । सनराइज बैंक, सानिमा बैंक, प्रभु बैंक, नेपाल बैंकले विवरण सार्वजनिक गरेका हुन् ।
कुन बैंकको विवरण कस्तो ?
सनराइज बैंकले चालु आर्थिक वर्षको वित्तीय विवरण सार्वजनिक गरेको छ । बैंकको यस त्रैमाससम्मको नाफा ०.५३ प्रतिशतले बढेर ९४ करोड ९४ लाख रूपैयाँ पुगेको छ ।
गत वर्षको यसै अवधिमा बैंकको नाफा ९४ करोड ४३ लाख रूपैयाँ थियो । यस अवधिसम्ममा बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा २१ करोड ३३ लाख रूपैयाँ रहेको छ । यता बैंकको खुद ब्याज आम्दानी ११.३१ प्रतिशत घटेर १ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँमा सीमित भएको छ । बैंकको सञ्चालन नाफा भने ०.८३ प्रतिशत बढेर १ अर्ब ३५ करोड रूपैयाँ पुगेको छ ।
सरकारी स्वामित्वको नेपाल बैंकले चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो त्रैमासिक वित्तीय विवरण सार्वजनिक गर्दै बैंकले नाफा ०.१ प्रतिशतले मात्र घटेको जनाएको छ । बैंकले चालु वर्षको साउनदेखि पुस मसान्तसम्म एक अर्ब ३५ करोड ४ लाख नाफा गरेको छ । अघिल्लो वर्ष यही अवधिमा नाफा १९ लाखले बढी थियो । बैंकले चालु वर्षको ६ महिनामध्ये पछिल्लो तीन महिना (कात्तिकदेखि पुससम्म) ५५ करोड ४ लाख रूपैयाँ नाफा गरेको छ ।
बैंकले एक वर्षको अवधिमा ऋण एक खर्ब ३ अर्बबाट बढाएर एक खर्ब १६ अर्ब पुर्‍याएको छ । निक्षेप पनि एक खर्ब ४१ अर्बबाट १ खर्ब ४८ अर्ब पु¥याएको छ। बैंकको खुद ब्याज आम्दानी २ अर्ब ९९ करोडबाट २ अर्ब ७७ करोडमा झरेको छ । खासगरी ब्याज खर्च बढ्दा खुद ब्याज आम्दानी घटेको हो ।
सानिमा बैंकको सार्वजनिक वित्तीय विवरण अनुसार यस अवधिसम्ममा बैंकले १ अर्ब ६ करोड २७ लाख रुपियाँ खुद नाफा कमाएको छ । यो गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिको भन्दा ७.३८ प्रतिशत कम हो ।
गत आर्थिक वर्षको सोही अवधिमा बैंकले १ अर्ब १४ करोड ४७ लाख रुपियाँ खुद नाफा कमाएको थियो । खुद ब्याज आम्दानी र सञ्चालन नाफा घटेपछि बैंकको खुद नाफा घटेको हो । यस अवधिसम्ममा बैंकको वितरणयोग्य मुनाफा ८९ करोड २६ लाख रूपैयाँ रहेको छ ।
प्रभु बैंकले ३९.८७ प्रतिशतले खुद नाफा बढाएको छ । बुधबार सार्वजनिक गरेको वित्तीय विवरण अनुसार बैंकको खुद नाफा १ अर्ब ५१ करोड रूपैयाँ भएको जनाएको छ । बैंकले चालु वर्षको पछिल्लो तीन महिना (कात्तिकदेखि पुससम्म) ६६ करोड ८६ लाख रूपैयाँ नाफा गरेको छ । खुद ब्याज आम्दानी पनि बढेको छ ।
अघिल्लो वर्ष २ अर्ब ४५ करोड रूपैयाँ रहेको यस्तो आम्दानी यस वर्ष २ अर्ब ६९ करोड रूपैयाँ पुगेको छ । बैंकले व्यापार वृद्धि पनि ९९ अर्ब ३९ करोडबाट बढाएर एक खर्ब २६ अर्ब रूपैयाँ पुर्‍याएको छ ।
प्रकाशित: २०७७ माघ १४ गते १३:४१